Tsy fotoan’ny fanararaotana izao | NewsMada
Tsy fotoan’ny fanararaotana izao
Miseho ity ny olana iaraha-mizaka. Tsy ny eto Madagasikara ihany fa maneran-tany mihitsy. Miantraika amin’ny sehatra rehetra ny valanaretina coronavirus ka mitsontsorika ny toekarem-pirenena, na ireo efa mandroso izany na ny mbola an-dalam-pandrosoana.
Ho an’ny eto Madagasikara, na mbola tsy tafiditra eto aza ity areti-mandoza ity, efa miseholany ireo karazana fanararaotana isan-karazany. Tampotampoka eo, niakatra ny vidin’ny entana ilaina andavanandro. Soa fa nandray fanapahan-kevitra ny fitondrana hamerana ny vidiny eny an-tsena. Na izany aza anefa, mbola tsy hita taratra loatra eny an-tsena io fepetra noraisina io, raha ho an’ny omaly, ny anio no tsy fantatra. Olana hafa tsy maintsy sedrain’ny valalabemandry koa izay, ankoatra ny fitaintainana amin’ny mety hidiran’ny Covid-19 eto amintsika. Fahoriana iaraha-mizaka izy ity nefa mbola hararaotin’ny sasany hitadiavana tombony ho azy. Sao mba tsy rariny !
Fa etsy an-daniny koa, saina efa tsy milamina fa hendratrendratra lava, mbola hararaotin’ny sasany korontanina ihany amin’ny fanelezana vaovao tsy marina. Soa aloha fa nisy iray tratra mba ho anatry ny mbola mikasa hanao izany. Fa dia hifampihorohoro am-pitoerana eto ve isika mianakavy e? Tsy aleo mba ilay fitonian-tsaina no katsahina ! Rehefa milamina mantsy ny saina, misosa ho azy izay atao rehetra. Ao an-tsaina ao daholo ny hery rehetra enti-miatrika izay zava-miseho, na ratsy io na tsara. Tokony hampiharana lalàna, araka izany, ireo mikendry ny fandemen-tsain’ny vahoaka amin’ny fanelezana tsaho etsy sy eroa. Toe-tsaina mirefarefa amin’ny tany izany.
Ny tsy hadinoina kosa aloha, mba manararaotra kely mampitombo ny andro ipetrahany any ivelany ireo Malagasy tsy tafody an-tanindrazana noho ny tsy fisian’ny fiaramanidina niainga tany, toy izay niseho tao Congo, ny talata teo. Fanararaotana daholo izany.